यस्तो छ नुवाकोट देखि अमेरिकासम्म उत्तम लामिछानेको संघर्षमय यात्रा - Enepalese.com
यस्तो छ नुवाकोट देखि अमेरिकासम्म उत्तम लामिछानेको संघर्षमय यात्रा
इनेप्लिज २०७१ चैत २३ गते ९:४८ मा प्रकाशित
नुवाकोट चोकतेमा जन्मियर काठमाडौलाई कर्मथलो वनाइ सन २००३ मा अमेरिका हानिएका उत्तम लामिछाने टेक्ससका चिर परिचित अनुहार हुन । हाल उनी ड्यालसमा अवस्थित नेपाली समाज टेक्सस(NST) का सचिव पनि हुन । टेक्सासमा “निरन्तर संर्घष” को पर्यावाचि वनेका उनले अमेरिकामा टेके देखि नै विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाहरुमा काम गर्दे आएका छन । सह्दयी, सोझा एवं मिलनसार उत्तम सामाजिक संस्थामा राजनीति तिन कोश टाढा रहन पर्ने मान्यता राख्छन । व्यक्तिगत चासो भन्दा पनि सामूहिक हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने उनी आसन्न एन आर एन अमेरिकाको चुनावको टेक्सास राज्य सभापतिका सशक्त उम्मेद्धार पनि हुन । आगामी एन आर एन अमेरिकि चुनावका वारेमा हिमालय खवर डटकमका तर्फवाट शरद पोखरेल र उनको ताजा वार्तालापः
​तपाईको उम्मेद्धारी राजनैतिक अथवा सामाजिक कार्यका लागी ?
​नढाटिकन भन्दा मेरो उम्मेद्धारी सामाजिक कार्यका लागी हो । अमेरिकामा मेरो विगत कोट्टाउनु हुन्छ भने म सदैव सामाजिक कार्यका लागी दिन रात नभनि हिडेको व्यक्ति हु । जुन कुरा मेरो अहिले सम्मको व्यक्तिगत जीवनलाई नजिकवाट देख्ने जो कोहीवाट पनि लुकेको छैन । आफैले आफ्नो मूल्याङकन गर्दा पनि म भन्न सक्छु म राजनैतिक व्यक्ति हैन । स–साना सामाजिक कार्यहरुवाट पनि म जति आन्नदको महसुस गर्छु त्यो सम्भवतः म अन्य कुराहरुवाट गर्न सक्दिन । यीनै आधारहरुलाई पनि केलाउँदा मेरो उम्मद्धारी भनेको एन आर एन अमेरिका मा सामाजिक कार्यका लागी नै हो ।
तर एन आर एन अमेरिकालाई त हिजोआज मानिसहरुले राजनैतिक गर्ने संस्थाका रुपमा हेर्न थालेका छन नि त ?
यो मान्छेहरुको हेराइमा भर पर्ने कुरा हो । एन आर एन अमेरिका मैले जाने वुझे सम्म विशुद्ध गैह् राजनैतिक संस्था हो र रहन्छ पनि । होला नेतृत्वमा वसेका केही व्यक्ति विशेषहरुवाट कुनै कमि कमजोरी हुन गयो तर यसैलाई इस्यु वनायर एन आर एन अमेरिका राजनैतिक संस्था हो भन्नु त्यत्ति न्यायसंगत नहोला कि ?
​समाज सेवा गर्न एन आर नै किन अरु संस्था मार्फत सकिदैन ?
सान्र्दभिक प्रश्न उठाउनु भयो । म ग्रासरुट लेवलमा नै विश्वास गर्ने व्यक्ति हु । यही अनुरुप डालास क्षेत्रमा रहि नेपालीहरुको माझमा विभिन्न सामाजिक कार्यहरु निरन्तर गर्दे आएको छु र स्पष्ट भन्दा यसवाट सन्तुष्ट पनि छु यति भैकन पनि विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली दाजुभाई दिदीवहीनीहरु एवं अन्य एन आर एन मा रहेर काम गरि सकेका शुभ चिन्तकहरुवाट एन आर एन अमेरिकामा रहि अझ विस्तृत रुपमा कार्य गर्नु पर्ने सुझाव एवं सल्लाह आयो । गत वर्ष एन आर एन का अध्यक्ष श्री शेष घले संगको कुराकानीले पनि मलाई यस संस्थामा लाग्न थप हौसायो । यसैले निरन्तर गर्ने कार्यहरुका माझ अझ केही नौलो प्रयास स्वरुप एन आर एन अमेरिकाको उम्मेद्धार भएको हँु ।
उसो भए तपाई एन आर एन अमेरिकको टेक्सास राज्य संयोजक उम्मेद्धार, भविष्यमा के कस्तो भूमिका टेक्सासका नेपालीहरुका लागी खेल्दै हुनुहुन्छ ?
यो अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो । सम्भवत नेपालीहरुको वसोवासका हिसावले टेक्सास राज्य अमेरिकामा पाँच नम्वर भित्र पर्छ । यसैले यहाँ नेपाली दाजु भाई तथा दिदी वहिनीहरु प्रसस्त भेटिन्छन । संख्या धेरै भएका आधारमा यहाँ नेपालीहरु माझ समस्याहरु पनि प्रसस्त छन । पहिला त कति नेपालीहरु हाम्रो टेक्सास राज्य भित्र छन त्यो नै पूर्ण जानकारी भएको अवस्था छैन त्यसमाथि मैले प्रायः टेक्सासको विभिन्न ठाउँहरुको भ्रमण वाट के पायको छु भने नेपालीहरु यहाँ उन्नति गरेर, जमेर वस्नु भन्दा गुजारा प्रकृतिका ठूलो संख्यामा छन । ठूला कुरा किन गर्नु नेपालीहरु स साना जस्तो भाषा, रहनसहन, संस्कृति एवं आर्थिक समस्याहरुमा नै पिरोलिरहेको देख्छु यस अवस्थामा अव हामीले यस्ता समस्यालाई सम्वोधन मात्र हैन कार्यावन्यन हुने हिसावले कुनै न कुनै प्याकेज कार्यक्रम ल्याई अधि वढनु जरुरी भैसकेको छ जसका लागी म पूर्ण रुपमा लागी पर्ने छु ।
तपाईले खाली समस्याहरुको मात्र कुरा उठाउनु भयो यसलाई निराकारणका लागी के कस्ता योजनाहरु छन त्यो वताउन सक्नु हुन्छ ?
एन आर एन अमेरिकाको तर्फवाट उम्मेद्धार वनेको आधारमा नितिगत रुपमा मैले एन आर एन को निति नियम प्रति वफादार भई कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्न पर्ने हुन जान्छ । यस आधारलाई मध्यनजर गर्दे मैले केही वृहत कुराहरु सोचेको छु । जस्तो कुनै नेपाली नेपालवाट अमेरिका आई एन आर एन भएको अवस्थामा गर्न पर्ने प्रारम्भिक कार्यहरु एवं दिन पर्ने सुविधाहरु, त्यस्तै वर्षौ देखि वसिरहेका नेपालीहरुलाई दिन सकिने सुविधाहरु अनि यहा वस्न हुने नेपालीहरुवाट जन्मिएका नेपालीहरुलाई दिन पर्ने सुविधाहरु । नेपालवाट भर्खर आएका नेपालीहरुलाई हामीले अल्पकालीन रुपमा काम, खाना, वस्न देखि उसलाई दैनिक जिवनमा पर्न सक्ने समस्याहरु जस्तो भाषा, विभिन्न अफिसियल कामहरु भए आदि सुविधा दिन सक्छौ । त्यस्तै जो यहा वर्षौ वस्दै आएका छन तिनका लागी लगानीको प्रत्याभूतिको वातावरण मिलाउन सकिन्छ अर्को जो यहाँ जन्मेका नेपालीहरुका छोरा छोरी छन तिनका लागी हामीले हाम्रो पहिचानका वारेमा ज्ञानमूलक कार्यक्रम ल्याउन सक्छौ ।
​अव प्रसङ्ग वदलौ हालको एन आर एन वाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
शरदजी म सन्तुष्ट पनि छु र असन्तुष्ट पनि । सन्तुष्ट यस मानेमा कि एन आर एन ले जुन रफ्तारमा संगठन विस्तार गरेको छ त्यसलाई सहनिय नै मान्न पर्छ । दश वाह् वर्ष अगाडि गठन भएको संगठनले आज संसार भरि आफ्नो शाखा वनाईसकेको छ । त्यस वाहेक यसले अन्तराष्द्रिय एवं राष्द्रिय रुपमा आफ्नो दहे अतित्व पनि कायम गरेको छ । यति भैकन पनि एन आर एन भित्र संगठात्मक रुपमा भएका जति पनि अस्वथ्थ राजनिति छ त्यस्को भने विरोध गर्न पर्छ । कता कता मलाई एन आर एन भित्र भैरहेका यस्ता अस्वथ्थ राजनिति ले कतै यस संस्थालाई नै भडखालोमा त लाने हैन भन्ने डर पनि छ ।
​ठिक छ एन आर एन भित्रको राजनिती सही नरहेको त वताउनु भयो यसको निराकरण पनि त होला ?
अवश्य यसको निराकरण भनेको अवका दिनमा राजनिति गर्ने मानिसहरुले के वुझ्न पर्यो भने एन आर एन भनेको राजनिति गर्ने थलो हैन । अझ म त साथिहरुलाई के भन्छु भने नेपालको राजनिति अमेरिकामा नगरु । कसैलाई राजनिति प्रति त्यस्तै लगाव छ भने अमेरिकि राजनितिमा नै संलग्न हुदा अझ राम्रो । कमसेकम यसले अमेरिका को तल्लो लेवलमा भने पनि नेपालीहरुको आवाजको प्रतिनिधित्व हुन सक्छ । राजनितिको लागि सामाजिक संस्थाको प्रयोग भने किमार्थ सहि हैन ।
आशावादी त कुनै पनि काममा हात हाले देखि नै भै हालिन्छ । अझ अहिलेको मेरो उम्मेद्धारी भनेको आफूले यस पदको इच्छा गर्नु भन्दा पनि साथिहरु र शुभ चिन्तकहरुको प्रेरणा र लगावले हो । त्यस वाहेक विगत देखि यही क्षेत्रमा लागेको र आगामी दिनहरुमा पनि निरन्तर रहने हिसावले जित्न पर्ने दरो आधार देख्छु ।